नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू, छाडा प्रवृत्ति देखाउने हो भने प्रवक्ता पद छोड्नुस् : विष्णु रिमाल - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ मंसिर २७ गते १२:२८ मा प्रकाशित
सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक किचलोको चंगुलमा फसेको छ । सचिवालय बैठक बस्ने दिन अध्यक्ष केपी ओलीप्रति रुष्ट बन्दै चार जना नेताले बैठक नै बहिष्कार गरेपछि दिनप्रतिदिन विवाद बढिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारको कामप्रति पनि असन्तुष्टी चुलिदै गएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार
सरकारको आलोचना गर्नेहरु एउटै विषयमा अल्झिरहेका छन् । तर सरकार धेरै विषयमा काम गर्दै छाँै । सबैखाले समस्या समाधान गर्दै देश विकास गर्ने सरकारका लक्ष्य छ ।
यो पानी तताएजस्तो होइन । स्विच दबाएजस्तो पनि होइन । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जतिबेला सही अपराधी पत्ता लाग्छ, त्यसबेला सार्वजनिक गरिहाल्छ । अब निर्मला पन्त प्रकरणका दोषी चाँडै नै पत्ता लाग्छ ।
२ दिन मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीसहित परिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा समस्याहरुको पोको खोलियो । ति समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
संघीयता त कार्यान्वयनमा आइसक्यो नि । प्रणालीलाई लेखाजोखा गरेर हुँदैन । संघीयता खर्चिलो भयो भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । संघीयता र संविधानको विरोधीहरु बोलिरहेका छन् । तर हामी संघीयतालाई सफल बनाउँछाँै ।
तपाईको पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गयो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्रीले पार्टी चलाउनु हुँदैन भन्नुभयो । बैठक पनि बहिष्कार हुन थाल्यो । समस्या चुलिएको हो ?
तर प्रवक्ताको मात्रै कुरा होइन नि, सचिवालय बैठक त चार जना नेताहरुले बहिष्कार गरेका छन् ?
केपी ओलीको बैठकमा समयमै नपुग्ने बानीले बहिष्कार गर्नुपरेको भनेर त प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नुभएको छ त । बैठक पनि पार्टी कार्यालयमा राखिएन भन्ने गुनासो छ ।